Zavakanto & Kolontsaina · Marsa, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Marsa, 2010
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Marsa, 2010
Etiopia 16 Marsa 2010
Shina 11 Marsa 2010
Amerika Latina 10 Marsa 2010
Maraoka 05 Marsa 2010
Fandraisana anjara BBC : “fomba fijerinao izao tontolo izao”
Angletera 03 Marsa 2010
Nosoratan'ny Young People's Media Network fa mila anao ny BBC handefa aminy roa minitram-panadihadiana amin'ny “fomba fijerinao izao tontolo izao” ka haely manerantany izany. Hatramin'ny faha-12 marsa ho avy izao no iandrasana izany. Azonao vakiana ato ny fisoratana anarana ho amin'izany [fifaninanana] izany. Juliana Rincón Parra
Espaina 02 Marsa 2010
Manaiky ny fisoratana handray anjara amin'ny fifaninanana fanaovan-gazety andiany faharoa hatramin'ny faha-15 marsa ho avy izao ny vohikalam-panaovan-gazety Espaniola Bottup. Hotondroina ho “Solontena manokan'” ny Bottup ary homena loka fandehanana maimai-poana any amin'izay toerana rehetra tiany hanaovana fanadihadiana (€1800 farafahabeny) izay mandresy amin'izany. Tafiditra ho anisan'ny mpitsara hifantina izay homena ny...